Sharciga Odayga | Legal Aid Society
Adeegyada Sharciga Waayeelka
Iyada oo laga helo maalgalinta xafiisyada deegaanka ee gabowga (OFA), waxaan bixinaa talo qaanuuneed sharci ah iyo wakiilnimo waayeelada da'da 60 sano iyo wixii ka weyn arrimaha sharciga madaniga ah (aan dembiile ahayn). Dakhligayaga ama xuduudeedka ilaha, ma quseeyo markii kiisaska noo Xaqiijiyay Xafiiska Gabowga.
Waxaan wax ka qabannaa dhibaatooyin badan oo sharciyeed oo kala duwan oo loogu talagalay waayeelka, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka macaamiisha, arrimaha qoyska, helitaanka daryeel caafimaad, arrimaha gargaarka bulshada, dhibaatooyinka guryaha, qorsheynta mustaqbalka (tusaale ahaan dardaaranka, dardaaranka nolosha, wakiillada daryeelka caafimaadka, awooda qareenka, iyo qorsheynta Medicaid), xadgudubka dadka da'da ah, iyo arrimo kale oo badan oo xagga sharciga ah.
Broome, Delaware, Herkimer, Jefferson, Madison, Oneida, Onondaga iyo Otsego waxaa loogu adeegayaa maalgelinta OFA.
Waayeelka ku sugan Cayuga, Chenango, Cortland, Lewis iyo Oswego sidoo kale waa ay u qalmi karaan adeegyadeena laakiin waa inay lahaadaan dakhli hoose iyo ilaha dhaqaalahoodu.
Loogu tala galay Delaware, Herkimer, Jefferson, Madison, Oneida iyo Otsego Counties:
La xiriir xafiiska deegaankaaga ee gabowga. Booqo https://aging.ny.gov/ si aad u hesho Xafiis gabowga ku dhow. U sheeg xafiiska gabowga inuu u baahan yahay caawimaad sharciyeed.
Haddii xafiiskaaga da'da ahi aanu kaa caawin doonin, fadlan na soo wac, khadka tooska ugu dalbo, ama booqo mid ka mid xafiisyadayada. Waxaad wali uqalami kartaa adeegyadeena. Si aad u hesho xafiis kuugu dhow, dhagsii isku xirka hoose:
Goobaha Xafiisyada iyo Nambarada Telefoonada